င ဝန် န ဒီ: December 2013
ဝန်ဆောင်မှု နဲ့ပြည်သူ့ အတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ စနစ်
ဂတ်စ် အရောင်းဆိုင်ဝန်ထမ်းမလို တဲ့ ပင်လယ်ကမ်းခြေက ဆိုင်လေးပါ
ပင်လယ်ကမ်းခြေက အများသုံး ရေချိုးခန်း အဝတ်လဲခန်း အိမ်သာ အားလုံး အခမဲ့နေရာတွေ
ကားပါမစ် နိဂုံး ပြည်သူ့ တန်းတူ ရပိုင်ခွင့်
စာကရေးမှာပါ မဟုတ်ရင် တနှစ်မှာ ကား အရောင်းအဝယ် တွေ ၃ လလောက် သတင်းနားထောင်လိုက် အရောင်းအဝယ်ရပ်လိုက် ဈေးကစားခံရလိုက် ဖြစ်နေတော့ မြန်ပြည်နစ်နာလို့ ပါ အခုက ဖယ်ဒရယ် ပါ ထိလာတော့ ရေးကို ရေးမှာပါ
မိမိအတွက်မဟုတ်ပေမဲ့ အများအတွက် ရေးသင့်တယ်ထင်တာပဲ
အဲဒါနဲ့ ကြာနေတာ အများအတွက် အကျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကြာနေတာရယ် သူတစ်ပါး မထိမိအောင်လည်းဖြစ်စေချင်လို့ ပါ
အခွန်မကောက်သင့်သော စက်တပ်ယာဉ် သို့ မဟုတ် အစိုးရက အလကား ဝန်ဆောင်မှု ပေးသင့်သော wheel chair
ဂေါက်ကွင်းသုံးကား ခရီးနီး ပါအသုံးဝင် အင်ဂျင်တပ် နယ် တွေ တောတွေ အရေးကြီး လူနာ လှည်းအစားတင်ပို့ နိူင်
နေရာစုံ ဆေးရုံ လိုက်မဆောက်ပေးနိူင်ခင် ခွင့်ပြုသင့် စက်တပ်ယာဉ်
Posted by ငဝန်နဒီ at 2:23 AM No comments:
The governor of Tokyo resigned
TOKYO: The governor of Tokyo resigned on Thursday after he admitted receiving $500,000 fromahospital tycoon ahead of his election in what he claimed was an interest-free, personal loan.
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:26 PM No comments:
WASHINGTON: The US Treasury on Tuesday levelled sanctions againstaMyanmar military official and three Myanmar businesses for trading arms with North Korea.
The Treasury said the sanctions, which forbid any US person or entity from doing business with those blacklisted, "does not generally target" the government of Myanmar.
Lieutenant Colonel Kyaw Nyunt Oo and Myanmar firms Asia Metal Company, Soe Min Htike Co., and Excellence Mineral Manufacturing Co., had been involved in buying arms from North Korea despite strict international sanctions on the Pyongyang regime over its nuclear program, the Treasury said.
"The revenues from these continuing military sales directly support North Korea's illicit activities," said Treasury Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence David Cohen.
Kyaw Nyunt Oo, the Treasury said inastatement, isaBurmese military staff officer who acts on behalf of the Directorate of Defence Industries (DDI), which was blacklisted by Washington last year mainly for its arms-trade ties to North Korea.
In July, the Treasury set sanctions on the DDI's chief, Lieutenant General Thein Htay.
The Treasury noted that in November 2012, the Myanmar government "publicly announced its intention to abide by United Nations Security Council Resolution 1874, which prohibits the procurement of military goods and assistance from North Korea."
မြန်မာ့ အသံ လေးကြားချင်မြင်ချင်ရင်တော့ MRTV4
ထိုင်းနဲ့ မြန်မာဘောလုံးပွဲ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်နေတာ ကြည့်လို့ ရနေပါပြီ
Posted by ငဝန်နဒီ at 9:21 PM No comments:
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:47 AM No comments:
သတင်းတင်တာတွေက တရုတ် အကြောင်းရေး ပြီး ဂျပန် ဝန်ကြီးပုံနဲ့ 
မြန်ပြည် တရုတ် အလံမီးရှို့ တာ ပြဿနာ သတင်းကို ရောက်ရေးထားတာတွေ့ လို့ ပါ သတင်းက တရုတ်သတင်း ဖြစ်ပြီး ဓာတ်ပုံ က ဂျပန်ဖြစ်နေတာပါ
တရုတ်ပြည် မှာ ဂျပန် အလံမီးရှို့ တာ တော့ မမေ့ ကျပါနဲ့ 
မဖွကျပါနဲ့ဘယ်နိူင်ငံမဆို အကောင်းအဆိုးရှိနေတာပါ
မြေ မရ ရေမရ လေ မှာ ချ လို့ကတော့ အားပေးနေပါတယ်
နယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလား အတွက် လူတွေ စိတ်မကောင်းကျ ဂုဏ်ပြုတာ သူ့ တိုင်းပြည်တခုထဲ မဟုတ် ကမ္ဘာကို ပေးဆပ် ခဲ့ သူ ကို ရေးရမှာ မဟုတ်တယုတ် တွေ ရေးနေရတယ်
ရန်သူ ကို မိတ်ဆွေ ဖြစ်စေသူ က ကမ္ဘာတည်သရွှေ့ ပါ
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး လူမည်း သမ္မတဖြစ်သူ၊ အသားအရောင်ခွဲခြားမှု ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင် Nelson Mandela ဟာ ကြာသာပတေးနေ့မှာ ကွယ်လွန်သွားပါပြီ။ ကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသက် ၉၅ နှစ်ရှိပါပြီ။ မစ္စတာ မန်ဒဲလားဟာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းပဲ ကွယ်လွန်သွားပြီ ဆိုတာကို တောင်အာဖရိကသမ္မတ Jocob Zuma က တနိုင်ငံလုံးကို ရုပ်မြင်သံကြား ကနေ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံအဖို့ တန်ဖိုးအကြီးဆုံးသားတဦး ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီလို့ မစ္စတာ Zuma က ကြေညာပါတယ်။ မစ္စတာမန်ဒဲလားကို နိုင်ငံတော်ဈာပနနဲ့ ဂုဏ်ပြုမှာဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးသား အလံတွေကိုလည်း ၀မ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ် တိုင်ဝက်လွှင့်ထူသွားမယ်လို့ မစ္စတာဇူးမားက ပြောပါတယ်။
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာ လူနည်းစုအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ လူမည်းတွေအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကို တွန်းလှန်တိုက်ဖျက်ရာမှာ ဦးဆောင်ခဲ့မှုကြောင့်၊ မစ္စတာ မန်ဒဲလားဟာ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ဆယ်စုနှစ်သုံးစုကြာ ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။လွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုင်ရာ အထွဋ်အမြတ်သင်္ကေတရပ်အနေနဲ့ သူ့ကို တန်ဖိုးထားခဲ့ကြပါတယ်။
မစ္စတာမန်ဒဲလားဟာ အသားအရောင် ခွဲခြားမှုဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ လူဖြူသမ္မတ ဒီကလပ်နဲ့အတူ နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ပူးတွဲ ချီးမြင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီနောက်နှစ်မှာတော့ သူဟာ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး လူမည်း သမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
မစ္စတာမန်ဒဲလားကွယ်လွန်သွားတာကို ကြေညာသွားပြီးနောက် တကမ္ဘာလုံးက သူ့အတွက် ၀မ်းနည်းဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာ သတ္တိအပြောင်မြောက်ဆုံး အကောင်းဆုံးလူသားတဦး ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီလို့ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားက ပြောခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား ဝမ်းနည်းစကားဆို။
မစ္စတာမန်ဒဲလားကို စံပြနမူနာမထားပဲ သူ့ဘ၀ကို ဘယ်လိုမှ စိတ်ကူးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း သမ္မတအိုဘားမားက တင်စားဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် David Cameron ကလည်း တန်ဖိုးကြီးတဲ့မီးတောက်တခု ကမ္ဘာပေါ်က ကွယ်ပျောက်ခဲ့ပြီလို့ သူ့ရဲ့ တွီတာစာမျက်နှာမှာ ရေးခဲ့ပါတယ်။ မစ္စတာမန်ဒဲလားဟာသူ့ရဲ့ သူရဲကောင်းဖြစ်ပြီး၊ အခု ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ရုံး အမှတ်၁၀ ဒေါင်းနင်းလမ်းအိမ်မှာ အလံတိုင်ဝက် လွင့်ထူဖို့ ပြောထားတယ်လို့လည်း မစ္စတာကင်မရွန်က ရေးထားပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:25 PM No comments:
စာကရေးချင်တာကြာပါပြီ အပြစ်ပြောတာမျိုး မရေးချင်လို့ ပါ
အခုတော့. အဆောင်ကျောင်းသားက နိူင်ငံရေးမလုပ်ရ ဘာကိုဆိုတာလဲတော့မသိ
အဲဒါဆို နိူင်ငံရေးပြောတဲ့သမ္မတစကား နားမထောင်မိပါစေနဲ့ 
လွတ်တော်က ပြောတာတွေသိရန်မလို လွတ်တော်ဥပဒေ အခြေခံဥပဒေသိရန်မလို
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးသူကို မဖမ်း တင်ပြသူ ကို ဖမ်းဖို့ လုပ်နေပြီ
သိတာတွေမရေးမိပါစေနဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးတာ ကို အကာအကွယ်ပေးနေတာလားကမ္ဘာမှာ ဒုတိယကနေ ပထမနေရာ ကြိုးစားနေတာလားမသိ
နစ်နာသူက တရားစွဲခွင့်ရှိပါတယ် ဒီမိုကရေစီ ကရေးသူကရေး နစ်နာသူ ကတရားစွဲ တကယ်လွတ်လပ်ခွင့်ပါ
ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားအတွက် အရေးကြီးပါတယ် ဒါကအခြေခံက တန်းတူ အခွင့်အရေးပါ
အခွင့်ထူးခံ လုပ်သူတွေက ဖယ်ဒရယ်ဆိုတာ အိပ်မက်ထဲ ယောင်အော်နေတာပါ
တန်းတူ လုပ်ပြီး တိုင်းရင်းသားတွေ ရှေ့ မားမားရပ် ဒီမိုကရေစီ ထဲက ဖယ်ဒရယ် ကို ဆွဲထုတ်ရမှာပါ
ကားဟောင်းတစ်စီး အစုတ် ၅ သိန်းတန် ကို သိန်းတစ်ရာကျော်အောင်လုပ်နေတာ တော်တာလား မတတ်တာလား
ညီမျှချင်း မသင်ခဲ့တာတော့ သေချာသည်
မြန်မာတွေ ဘဝ ကို တစ်ထစ်ချင်း ဖျက်ခံနေရတာပါ
ဘိုးဘွားပိုင်လဲအသိမ်းခံရ မိမိ လက်ငုတ်မြေ ပြန်ဝင်ရင် အပစ်ခံရမယ် အဖမ်းခံရမယ်ဆိုတော့
ရှယ်ယာတွေဘာတွေ လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ စတော့ရှယ်ယာ ဆိုတာထက် တော့ ရှယ်ယာတွေ လုပ်သင့်တာတွေကတော့
လယ်သိမ်းလို့ ရပြီး လက်နက်နဲ့ပစ်လို့ ရနိူင်တဲ့ အခွင့်အရေးရှိသူရဲ့ရှယ်ယာ
မြေသိမ်း ကားကို အခွန်ပျောက် သွင်းခွင့်ရသူတွေရဲ့ရှယ်ယာ
အလုပ်သမားခ ကို တရက်ကို တစ်ဒေါ်လာ လောက်ပဲပေး ပြီးရင် အကြောင်း ပြ ပြန်နုတ် တစ်လမှ ဒေါ်လာ ၁၀ လောက်နဲ့လုပ်နေတဲ့ ရှယ်ယာ
သွားလာစရိတ်နုတ် နေတာ နုတ် စားတာ နုတ် လို့ ရတဲ့ အပြင် လူကို ပါယူပေးမလို ဖြစ်ရတဲ့ ရှယ်ယာတွေ
မြန်မာမှာ တော့ ရှယ်ယာတွေပါ အထူးသဖြင့် မူးယစ်ဆေး ငွေ အတု လုပ်တာတွေ က အထူးတော့ပေါ့
ပိုတော့ ကျတာ ကတော့ ငွေမည်းကို ငွေဖြူလုပ်ရတာတွေ ဖြစ်နေတဲ့ ရှယ်ယာကတော့
စတော့ရှယ်ယာ စတာနဲ့ဝယ်သင့်တဲ့ရှယ်ယာတွေပါ
တန်းတူတာကို လူတိုင်းအတွက် ဖြစ်ဖို့ မလွယ်ပေမယ့် လုပ်နေရမှာကတော့ လူတိုင်းအလုပ်ပါ
သင်ဟာ မြန်မာပြည်ဖွားမြန်ပြည်သား ဖြစ်ရင် ပေါ့
ကမ္ဘာမကြေ မြန်မာပြည်။ ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 1:12 AM No comments:
ဝန်ဆောင်မှု နဲ့ပြည်သူ့ အတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ စနစ်...
မြန်မာစစ်အရာရှိ ၁ ဦးနဲ့ စီးပွားရေးကုမ္ပဏီ ၃ ခုအပေါ်...
သတင်းတင်တာတွေက တရုတ် အကြောင်းရေး ပြီး ဂျပန် ဝန်ကြီ...